China Temperature Sensor Thermopile IR Detector contactless Human Body Monitoring STP11DF55 mpanamboatra sy mpamatsy | Masoandro
Temperature Sensor Thermopile IR Detector contactless Human Body Monitoring STP11DF55
Ny sensor thermopile infrared STP11DF55 ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandraika dia sensor thermopile manana voltase signal output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Noho ny famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP11DF55 dia matanjaka amin'ny karazana tontolo iainana fampiharana.
Ny STP11DF55 misy karazana puce sensor sensor thermopile CMOS vaovao dia manana fahatsapana tsara, coefficient ny mari-pana kely amin'ny mari-pahaizana ary koa ny fitomboana ambony sy ny fahamendrehana. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
Ny sensor thermopile infrared STP11DF55 ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandraika dia sensor thermopile manana voltase signal output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Noho ny famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP11DF55 dia matanjaka amin'ny karazana tontolo iainana fampiharana. Ny STP11DF55 misy karazana puce sensor sensor thermopile CMOS vaovao dia manana fahatsapana tsara, coefficient ny mari-pana kely amin'ny mari-pahaizana ary koa ny fitomboana ambony sy ny fahamendrehana. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
Teo aloha: Fitaovana IR mitaingina ambonin-tany ho an'ny tsy fitadiavana mari-pana momba ny vatana STP10DF55C-AD
Manaraka: Famantarana ny maripana tsy misy fangarony olona tsy mifandray amin'ny fandrefesana Thermopile IR Sensor STP11DF55C